Uthi ukhethe iSundowns ngoba iyona ehamba phambili ebholeni lakuleli uDe Reuck - Impempe
Uthi ukhethe iSundowns ngoba iyona ehamba phambili ebholeni lakuleli uDe Reuck
URushine De Reuck osanda kusayina kwiMamelodi Sundowns
Umdlali omusha weMamelodi Sundowns, uRushine De Reuck useveze ukuthi isizathu esikhulu esimenze aqoke leli qembu lasePitoli wukuthi yilo elihamba phambili ebholeni lakuleli kule minyaka embalwa edlule.
UDe Reuck usayine iminyaka emihlanu kwiMasandawana ngoLwesihlanu esuka kwiMaritzburg United kanti kungenzeka abonakale okokuqala kuleli qembu lakhe elisha ngeSonto uma selidlala neChippa United emdlalweni weDStv Premiership ngeSonto.
“Kade ngafisa ukuba lana,” kusho uDe Reuck kwi-website yaleli qembu ngokusayina kwakhe eChloorkop. “ISundowns seyibe yiqembu elihamba phambili eNingizimu Afrika isikhathi eside manje, kanti nami ngifuna ukuba yingxenye yalokho. Ngijabule kakhulu,” kusho yena.
Ngeke abe nesizungu uDe Reuck eChloorkop njengoba kukhona ozakwabo ayedlala nabo kwiMaritzburg, oLebohang Maboe noBrian Onyango. Ubesehlale iminyaka emine kwiTeam of Choice ngaphambi kokuzicelela ukukhululwa aye kwiSundowns.
Khonamanjalo, umdlali wasesiswini kwiBrazilians, uHashim Dominngo uthi izinto zisahamba kahle kuleli qembu eliphekwa abaqeqeshi abathathu ngokuhlanganyela, okungoManqoba Mngqithi, Rulani Mokwena noSteve Komphela.
“Iqembu lisenza kahle, futhi liyawawola amaphuzu kanti lokhu kukwenza ufise ukuba yingxenye yakho ufake isandla. Uma sekufike isikhathi, izinto zizozihlelekela zona,” kusho uDomingo, ongakangeni ngokugcwele eqenjini eliqala imidlalo njengoba esangena esuka ebhentshini uma kwenzeka edlala.
Akumkhathazi nokho lokhu ngoba uthi uyafunda kubadlali asebenamava eqenjini okuzomenza umdlali ongcono ngokuhamba kwesikhathi. ISundowns iyona ezihola phambili kwiPremiership, uthi lokhu kubenza behlale bezimisele.
“Ukuba phezulu kusho ukuthi wonke amaqembu ayanibona futhi ayanihalela, ngakho ahlezi efuna ukuniketula. Sifuna ukuqinisekisa ukuthi sihlala phezulu kuze kube sekugcineni,” kusho lo mdlali obekwiBidvest Wits ngesizini edlule.
Previous Previous post: ‘Vele siyamkhumbula uBilliat,’ kusho isikhulu seSundowns
Next Next post: Uzofihlwa ngenyanga ezayo uMadisha osekuqinisekisiwe ukuthi nguyena owashona engozini yemoto ngoDisemba